Akwụkwọ Nate Gadzhibalaev na Martech Zone |
Edemede site na Nate Gadzhibalaev
Nate bu onye hiwere Amplifr, ọrụ na-enyere ndị mmadụ na ụlọ ọrụ aka aka site na ịhazi usoro mgbasa ozi ha na-akpaghị aka, na-enyere ha aka inweta ego. Site na nzụlite njikwa ngwaahịa, mmepe azụmaahịa, na uto mba ụwa, ọ na-ezube inyere ndị mmadụ na azụmaahịa aka site n'igosi ha otu ha nwere ike isi mee ka ndị na-ege ha ntị na-abawanye uru na nke ọma.
Omume Kachasị Mma maka Usoro Ezubere nke Social Media Posts
Tuesday, May 15, 2018 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Nate Gadzhibalaev
Hazi usoro mgbasa ozi gị ga-abụ akụkụ dị mkpa nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị, na enweghị isi ịsị, ọ nwere ọtụtụ uru. Ewezuga na ị gaghị eche echiche maka ikenye na ọtụtụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, ị ga-enwekwa usoro oge niile, na-eme atụmatụ oge na-echekwa oge, ma nwee oke nkesa-ahụike ebe ị nwere ike ịhazi tupu oge eruo. Kama ịnọ na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta oge niile kwa ụbọchị, ịhazi usoro